China Professional OEM CNC Machined Qaybaha warshad iyo alaab-qeybiyeyaasha |BAASILE
Mashiinka Gaarka ah ee CNC ee aan caadiga ahayn
Mashiinka xakamaynta tirooyinka waa nooc ka mid ah farsamaynta aan caadiga ahayn, kaas oo beddela xajmiga shaqada ama waxqabadka shaqada.Marka la isticmaalayo CNC Machinery in mishiinada qaybaha farsamada, farsamayaqaanku waa in ay ku qoraan dhammaan habka farsamada, xuduudaha farsamo iyo xogta barokicin ee lagu soo ururiyey barnaamijka, iyo in habka macluumaadka dhijitaalka ah ee lagu duubay dhexdhexaadinta gacanta si loo xakameeyo qalabka mashiinka.
Sidaas awgeed waxaa la arki karaa in tignoolajiyada farsamaynta mashiinka CNC iyo tikniyoolajiyadda farsamaynta mashiinka guud ay ku dhow yihiin isku mid mabda'a, laakiin dhammaan habka wax-qabadka mashiinka CNC waa mid firfircoon oo wanaagsan, si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo uu leeyahay sifooyin u gaar ah.
Nidaamyada wax-soo-saarka mashiinnada xakamaynta tirada iyo socodka habka
1. Habka Wax-soo-saarka:
Habka loogula sheekeysto alaabta ceeriin ee alaabta waxaa loo yaqaan habka wax soo saarka.Habka wax soo saarka inta badan waxaa ka mid ah gaadiidka iyo kaydinta alaabta ceeriin, diyaarinta wax soo saarka, diyaarinta shaqo madhan, farsamaynta farsamaynta, daaweynta dusha, isu imaatinka, tijaabinta, debugging, processing anti-oxidation iyo baakadaha alaabta, iwm.
Habka wax-soo-saarka waxa kale oo loo qaybin karaa habka wax-soo-saarka mishiinka oo dhan ama habka wax-soo-saarka qayb keliya, marka la eego habka wax-soo-saarka guud ahaan isku-duwidda warshadda ama habka wax-soo-saarka hal aqoon-is-weydaarsi.
2. Habka Farsamada:
Habka gaarka ah ee wax soo saarka, u beddel qaabka iyo cabbirka alaabta bannaan si toos ah, u beddel badeecada aan u baahanahay, oo samee alaabta la dhammeeyey ama alaabta dhammaatay ee loo yaqaan habka farsamada.Habka tignoolajiyadu waa qayb aad muhiim u ah oo lagama maarmaan u ah dhammaan habka wax soo saarka.Qaybta ugu muhiimsan ee habka wax soo saarka warshadaynta farsamaynta farsamada waa habka farsamada farsamada.
Waa maxay qaybaha socodka mMachining-ka?
1. Diyaarinta Habka Makiinada:
Habka mashiinada waxaa loola jeedaa hawl ama shaqaale hawl-wadeenno ah, ka shaqeeyaan meel go'an ama mishiinada farsamaynta go'an, hal ama in ka badan oo qaybo ah oo lagu dhamaystirayo habka farsamaynta qaybta, habka mashiinku waa saldhigga qaybta farsamaynta farsamada. , sidoo kale waa aasaaska habaynta cutubka qorshaha wax-soo-saarka;
2. Rakibaadda Qalabka Shaqada:
Ku dhejinta qaybta mashiinka hal mar waxaa loo yaqaan habka rakibidda.Mararka qaarkood, isla habkaas, qalabka shaqada ayaa laga yaabaa inuu u baahdo in lagu rakibo dhowr jeer si loo gaaro ujeedada ugu dambeysa.Waa in halkan lagu ogaadaa in tirada rakibaadda la yareeyo habka wax-soo-saarka, si loo yareeyo qaladka rakibidda oo loo badbaadiyo waqti dheeri ah.
3. Habka loo maro:
Dusha sare ee qaybaha, iyada oo aan isbeddelin xaaladda qalabka, xawaaraha iyo quudinta, habka dhammaystirka joogtada ah ee qaybtaas waxaa loo yaqaan tallaabo habsocodka.Tallaabada geeddi-socodku waa unugga aasaasiga ah ee habka farsamaynta;
4. Xarunta Hagaajinta:
Si loo dhamaystiro habsocod cayiman, hal mar oo la isku xajiyo ka dib, qalabka shaqada iyo qalabka lagu rakibo ayaa lagu dhaqaaqi karaa boos kasta, tusaale ahaan, iyadoo madaxa tilmaanta si uu u miiro laba geesood, leexasho kasta waxaa loogu yeeraa xarun wax soo saar.
Isla tillaabada habka, haddii farsamayntu ay tahay mid aad u weyn, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qalab isku mid ah, xawaare isku mid ah iyo quudin, dusha sare ee processing isku mid ah marar badan jarida, gooyn kasta waxaa loogu yeeraa feed.
BMT waa soosaarayaal mashiinada CNC ah oo xirfad leh, warshadu waxay leedahay mashiinada farsamaynta saxda ah, oo bixisa CNC, mashiinada farsamada iyo adeegyo kale.
BMT waxay leedahay waayo-aragnimo qani ah oo ku saabsan baabuurta, hawada hawada, farsamada, cuntada, tamarta, saliidda, beeraha, iwm.
Hore: Su'aalaha Dhabta ah ee Habaynta Mashiinka ee CNC
Xiga: Qaybaha Aluminium Machining CNC
Habaynta Mashiinka Mashiinka ee CNC
Qaybaha birta xaashida-dhamaadka-sare ee la habeeyey, Makiinada, Machining sax ah, Mashiinka gaarka ah, Qaybaha Mashiinada Saxda ah, Cnc Titanium Machining,